MAS Fight မှာ ကစ်ဘောက်ဆင်သမား Yi Long နဲ့ ထိုးသတ်ဖွယ်ရှိတဲ့ Dave Leduc
23 Nov 2018 . 5:46 PM
မြန်မာ့လက်ဝှေ့အလွတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Dave Leduc ဟာ MAS Fight ပွဲစဉ်မှာ တရုတ်ကစ်ဘောက်ဆင်သမား Yi Long နဲ့ ထိုးသတ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ Muay Thai Authority သတင်းဌာနရဲ့ အဆိုအရ သိရပါတယ်။ Dave Leduc ဟာ ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့မှာ ထွန်းထွန်းမင်းနဲ့ ထိုးသတ်မှာဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၉ခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ Yi Long နဲ့ ထိုးသတ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
MAS Fight စည်းမျဉ်းသစ်အောက်မှာ ထိုးသတ်ရမှာဖြစ်ပြီး ကိုးမိနစ်တစ်ချီပဲ ထိုးသတ်ရမှာဖြစ်သလို အနားတောင်းခွင့်ရှိမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုးမိနစ်ပြည့်တဲ့အထိ ဆက်တိုက်ထိုးသတ်ရမှာဖြစ်ပြီး အလဲမထိုးနိုင်ရင် သရေအဖြစ် သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (အမှတ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်မှာ မဟုတ်ပါ။) လက်သီး၊ ခြေကန်ချက်၊ တံတောင်နဲ့ ဒူးတွေကို စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ခေါင်းတိုက်ခွင့်ပြုမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ငါးအောင်စလက်အိတ်ကို ဝတ်ဆင်ခွင့်ပြုထားပြီး သုံးကြိမ်အထိ အမှတ်စဉ်အရေခံရင်တော့ အရှုံးသတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အလဲမထိုးနိုင်ရင် သရေအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တာက မြန်မာ့လက်ဝှေ့နဲ့ တူသလိုရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပြီး ခေါင်းတိုက်ကွက်ကို ခွင့်မပြုတာက မွေထိုင်းနဲ့ ဆင်သလိုရှိပါတယ်။
မွေထိုင်းထိပ်သီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Buakaw Banchamek ၊ Sitthichai Sitsongpeenong နဲ့ Saiyok Pumpanmuang တို့နဲ့ ရင်ဆိုင်ဖူးတဲ့ Yi Long ဟာ ရှောင်လင်သိုင်းသမားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် (၃၁) နှစ်ရှိပြီး ကိုယ်အလေးချိန် (၇၂.၅) ကီလိုဂရမ်ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။ ပြည်သူ့အချစ်တော် Dave Leduc ဟာ ကိုယ်အလေးချိန် (၈ဝ) ကီလိုဂရမ်အထိရှိပြီး အသက်အရွယ်က (၂၆) နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
MAS Fight ပွဲစဉ်တွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကွာဟလွန်းတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေကို ထိုးသတ်ခွင့်ပြုထားပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ (၁ဝ) ရက်နေ့တုန်းက အရပ် (၅) ပေ (၁ဝ) လက်မဝန်းကျင်သာရှိတဲ့ Yi Long ဟာ အရပ် (၇) ပေ (၂) လက်မနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၅ဝ ကီလိုဂရမ် (၃၃ဝ ပေါင်) အထိရှိတဲ့ လူ့ ဘီလူးကြီး Choi Hong-man ကို အလဲထိုးအနိုင်ယူထားပါတယ်။ ကဲ . . . မြန်မာ့လက်ဝှေ့အလွတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Dave Leduc ဟာ ရှောင်လင်သိုင်းသမား Yi Long နဲ့ ဘယ်လိုရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်ကြစို့ရဲ့ ။
MAS Fight မှာ ကဈဘောကျဆငျသမား Yi Long နဲ့ ထိုးသတျဖှယျရှိတဲ့ Dave Leduc
မွနျမာ့လကျဝှအေ့လှတျတနျးကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ Dave Leduc ဟာ MAS Fight ပှဲစဉျမှာ တရုတျကဈဘောကျဆငျသမား Yi Long နဲ့ ထိုးသတျဖှယျရှိတယျလို့ Muay Thai Authority သတငျးဌာနရဲ့ အဆိုအရ သိရပါတယျ။ Dave Leduc ဟာ ၂ဝ၁၈ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ (၁၆) ရကျနမှေ့ာ ထှနျးထှနျးမငျးနဲ့ ထိုးသတျမှာဖွဈပွီး ၂ဝ၁၉ခုနှဈ အစောပိုငျးမှာ Yi Long နဲ့ ထိုးသတျဖှယျရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။
MAS Fight စညျးမဉျြးသဈအောကျမှာ ထိုးသတျရမှာဖွဈပွီး ကိုးမိနဈတဈခြီပဲ ထိုးသတျရမှာဖွဈသလို အနားတောငျးခှငျ့ရှိမှာလညျး မဟုတျပါဘူး။ ကိုးမိနဈပွညျ့တဲ့အထိ ဆကျတိုကျထိုးသတျရမှာဖွဈပွီး အလဲမထိုးနိုငျရငျ သရအေဖွဈ သတျမှတျမှာဖွဈပါတယျ။ (အမှတျနဲ့ ဆုံးဖွတျမှာ မဟုတျပါ။) လကျသီး၊ ခွကေနျခကျြ၊ တံတောငျနဲ့ ဒူးတှကေို စိတျကွိုကျအသုံးပွုနိုငျပွီး ခေါငျးတိုကျခှငျ့ပွုမှာတော့ မဟုတျပါဘူး။
ငါးအောငျစလကျအိတျကို ဝတျဆငျခှငျ့ပွုထားပွီး သုံးကွိမျအထိ အမှတျစဉျအရခေံရငျတော့ အရှုံးသတျမှတျမှာဖွဈပါတယျ။ အလဲမထိုးနိုငျရငျ သရအေဖွဈ သတျမှတျလိုကျတာက မွနျမာ့လကျဝှနေဲ့ တူသလိုရှိတယျလို့ ဆိုနိုငျပွီး ခေါငျးတိုကျကှကျကို ခှငျ့မပွုတာက မှထေိုငျးနဲ့ ဆငျသလိုရှိပါတယျ။
မှထေိုငျးထိပျသီးတှဖွေဈကွတဲ့ Buakaw Banchamek ၊ Sitthichai Sitsongpeenong နဲ့ Saiyok Pumpanmuang တို့နဲ့ ရငျဆိုငျဖူးတဲ့ Yi Long ဟာ ရှောငျလငျသိုငျးသမားတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ အသကျ (၃၁) နှဈရှိပွီး ကိုယျအလေးခြိနျ (၇၂.၅) ကီလိုဂရမျဝနျးကငျြ ရှိပါတယျ။ ပွညျသူ့အခဈြတျော Dave Leduc ဟာ ကိုယျအလေးခြိနျ (၈ဝ) ကီလိုဂရမျအထိရှိပွီး အသကျအရှယျက (၂၆) နှဈပဲ ရှိပါသေးတယျ။
MAS Fight ပှဲစဉျတှဟော ကိုယျအလေးခြိနျကှာဟလှနျးတဲ့ ပွိုငျဘကျတှကေို ထိုးသတျခှငျ့ပွုထားပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ နိုဝငျဘာလ (၁ဝ) ရကျနတေု့နျးက အရပျ (၅) ပေ (၁ဝ) လကျမဝနျးကငျြသာရှိတဲ့ Yi Long ဟာ အရပျ (၇) ပေ (၂) လကျမနဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျ ၁၅ဝ ကီလိုဂရမျ (၃၃ဝ ပေါငျ) အထိရှိတဲ့ လူ့ ဘီလူးကွီး Choi Hong-man ကို အလဲထိုးအနိုငျယူထားပါတယျ။ ကဲ . . . မွနျမာ့လကျဝှအေ့လှတျတနျးကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ Dave Leduc ဟာ ရှောငျလငျသိုငျးသမား Yi Long နဲ့ ဘယျလိုရလဒျတှေ ထှကျပျေါလာမလဲဆိုတာ ရငျခုနျကွစို့ရဲ့ ။